क्यानकाे चुनावमा परिषद् तगाराे - Nepal Cricket
क्यानकाे चुनावमा परिषद् तगाराे
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी)को निलम्बनमा परेपछि अभिभावकबिहीन नेपाली क्रिकेटले केहि निकास पाउँछ कि भन्ने आशामा फेरि जुँगाको लडाईं देखिएको छ ।
नेपाली क्रिकेटको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आइसीसीले नै गठन गरेको स्वतन्त्र कमिटीले असोज ३ र ४ गतेका लागि चुनावी साधारणसभा तोकेकै दिन नेपाली खेलकुदको अभिभावकत्व हेर्ने निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले साधारणसभाको मिती अबैधानिक भएको, २१ दिने मिती जारी गर्नुपर्ने र सबै सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्ने, परिषद्सँग स्विकृती लिनुपर्ने भन्दै विभिन्न मिडियामा बताए ।
क्रिकेट नयाँ बाटोमा अगाडि जान्छ कि भन्ने आशामा सिलवालको यो भनाईले अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । क्यानको नयाँ विधान जसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नै पारित गरेर आइसीसीमा पठाएको थियो, त्यसमा प्रष्ट रूपमा साधारणसभाका लागि ७ दिन अगाडि सूचना जारी गरे हुने भन्ने उल्लेख छ । तर सिलवालले कुन आधारमा २१ दिनको नोटिस जारी गर्नुपर्छ भने ? त्यो एउटा प्रश्न छ ।
सिलवालले भनेको अर्को कुरा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वीकृती नलिई सूचना जारी गरेको भन्नेमा क्यानको नयाँ विधानमा प्रष्ट लेखिएको छ, ‘संक्रमणकालीन अवस्थामा जिल्ला र प्रदेशको समन्वयमा केन्द्रीय निर्वाचनको मिती तोक्न सकिने लेखिएको छ ।’ त्यसमा कानुनी ब्यक्तिसँग सल्लाह गरेर भन्ने शब्द पनि छ । स्वतन्त्र समितीले यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै नयाँ चुनावको सूचना जारी गरेको हो । विधानमा नै लेखिएको छ, संक्रमणकालीन अवस्थामा आइसीसी र जिल्ला प्रदेशसँगको छलफलपछि मिती तोक्न सकिनेछ । यसमा परिषद्ले स्वीकृती दिनुपर्ने उल्लेख नै छैन ।
नयाँ नेतृत्वका लागि जिल्ला र प्रदेशका प्रतिनिधिसँगको परामर्शमा नै केन्द्रिय निर्वाचनको मिती तय गरिएको हो । यसमा स्वतन्त्र समितीका सदस्य लेख क्षेत्रीले सबैलाई जानकारी गराएपछि कानुनी परामर्शमा केन्द्रिय निर्वाचनको मिती तोकेको बताए ।
अब परिषद्को यो नयाँ चालले आसन्न क्यानको निर्वाचन के हुन्छ भन्ने ठूलो अन्योल बढेको छ । तर सदस्यसचिव सिलवाल आफैं पनि क्रिकेटको जानकार रहेको अवस्थामा परिषदबाट नै स्वीकृत भएको विधानमा के छ भनेर थाहा नभएको हो कि क्यान चुनावमा भाग खाेजेका हुन्र भन्ने प्रष्ट छैन । तर उनको यो भनाईले फेरी नेपाली क्रिकेटको विवादमा सरकारी हस्तक्षप त हुने होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।